ဘရူနိုင်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဘရူနိုင်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) [39 အတွက်ပြင်ဆင်] 1984 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (နောင်က "အက်ဥပဒေ" ဟုခေါ်) ၏အခန်း 2017 ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှနိုင်ပါတယ်အဖြစ် LLC သည်လုံးဝနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဘရူနိုင်းဘော်နီယိုအနီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာရေးကိုအစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အမည်ကား "ဘရူနိုင်း၏အစ္စလာမ့် Sultan" ။
ဘရူနိုင်းဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အ 1984 အတွက်၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့နှင့်ဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရမဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်အစ္စလာမ့်ဧကရာဇ်သည်နှင့်လုံးဝဆူလ်တန်ကထိန်းချုပ်ထား။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦး "ပေါင်းတစ်စည်းတည်းအစ္စလာမ့်အကြွင်းမဲ့အာဏာဘုရင်စနစ်" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
ဘရူနိုင်းသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်စီးပွားရေးအရ, ယင်း၏စီးပွားရေးကို၎င်း၏ဂျီဒီပီ၏အကြောင်းကို 90% များအတွက်စာရင်းကိုင်ကသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အရည်ကသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် 9th ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘရူနိုင်းအရှေ့တောင်အာရှ၌ပါသောဆီ၏ 4th အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဘရူနိုင်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုခံစားနိုင်သည်
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖြည့်: နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ LLC အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities ရှယ်ယာမြို့တော်မှ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးတစ်ဦး LLC ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ရှိပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဘရူနိုင်းဗြိတိသျှနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဘရူနိုင်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အမည်
LLC ရဲ့အခြားဘရူနိုင်းဥပဒေရေးရာ entity ကဲ့သို့တူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူအမည်အား အသုံးပြု. မရနိုင်ပါ။
LLC ရဲ့ပုဂ္ဂလိကန့်အသတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်လူသိများကြသည်ကတည်းကသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည် "Sendirian Berhad" သို့မဟုတ် "Sdn Bhd" ၏သူတို့ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်သောယင်း၏အဓိကရုံးသုံးဘာသာစကားမလေးအတွက်အဲဒီစကားတွေနဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
•ဒါရိုက်တာများ '' အမည်များနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီချက်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်,
•ရှယ်ယာရှင်များ '' နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာကဒ်များမိတ္တူ။
နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ရှယ်ယာရှင်များအများဆုံးအရေအတွက်က 50 ဖြစ်ပါတယ်။
ရှယ်ယာရှင်များကသူတို့အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းမှကန့်သတ်ထားပါသည်။ သူတို့ကအများပြည်သူရှယ်ယာသို့မဟုတ် debentures ရောင်းလို့မရပါဘူး။
ရှယ်ယာရှင်များ '' တာဝန်ယူမှုကိုရှယ်ယာမြို့တော်ဆီသို့မိမိတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်သည်။
တိုင်း LLC ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျကာမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက LLC အမြတ်အစွန်းအပေါ် 22% ၏ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်အခွန်ပြန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဝင်ငွေခွန်၏ Collector နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဘရူနိုင်းမျှမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, ဒါမှမဟုတ်အရောင်းအခွန်မျှ Value ကို Added အခွန် (VAT), အဘယ်သူမျှမပို့ကုန်အခွန်, လုပ်ခလစာအခွန်အခများ, ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်ရှိပါတယ်။
တိုင်း LLC နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှချိန်ခွင်စာရွက်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူအကောင့်ပြင်ဆင်သူတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ဒေသခံစာရင်းစစ်ကိုခနျ့အပျရမယျ။ အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်ပြန်သည့်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, LLC ရဲ့ဒါရိုက်တာ, မန်နေဂျာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးများ၏စာအုပ်များထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး LLC ထည့်သွင်းငါးခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းအထိကြာလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကဘရူနိုင်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူနိုင်သည် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုမရှိနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။